आज विहान टिकाको साइत १०.१९ वजे, कता फर्केर लगाउँदा उत्तम हुन्छ ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/आज विहान टिकाको साइत १०.१९ वजे, कता फर्केर लगाउँदा उत्तम हुन्छ ?
काठमाडौ । आज हिन्दुहरुको महान पर्व विजया दशमी । हरेक वर्ष जस्तो निकै उत्साह पूर्वक मनाउन नपाइए पनि परिवारका सदस्यकाबीचमा पर्व मनाइदैछ । कोरोनाको जोखिकाबीच आएको दशैं सुरक्षित भएर मनाउनु पर्नेछ ।
दुर्गापक्षको मुख्य दिन सोमबार विजयादशमी मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर मनाइँदैछ । घटस्थापनाका दिन स्थापना गरिएको घडाबाट अभिषेक गरी विजयादशमीको टीका लगाइन्छ ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले देवी विसर्जनको साइत बिहान १०ः११ बजे रहेको जनाएको छ । टीकाप्रसाद ग्रहण गर्न साइत खोज्नेका लागि भने १०ः१९ बजे उत्तम रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । विजयादशमी आफैंँमा शुभ दिन भएकाले टीका लगाउन सामान्य मानिसले साइत खोज्नु नपर्ने पनि उनले बताए ।
बंगलादेशले पनि गर्यो नेपाल वारे यस्तो निर्णय